ब्लग नाममा के छ? | Martech Zone
ब्लग नाममा के छ?
शनिबार, जुलाई २१, २०१। मंगलवार, जुलाई 4, 2017 Douglas Karr
पढे पछि नग्न कुराकानीहरू by रबर्ट स्कबल र शेल इजरायल, मैले मेरो ब्लगमा केहि परिवर्तन गर्ने निर्णय गरे। सब भन्दा खास कुरा, ब्लगको नाम। मेरो ब्लग केवल "Douglas Karr"पहिले, तर मैले नाममा केही काम गरें र चयन गरें प्रभाव र स्वचालनमा। मैले यसको बारेमा लेखें यहाँ.
मैले साइटसँग राम्रो चीजहरू पनि गरें, ग्राफिक्सलाई अधिक स्पष्ट रूपमा प्रयोग गर्दै, मेरो मुस्कुराएको मगको साथ नयाँ हेडर ग्राफिक, र सामग्रीको सावधानीपूर्वक विचार। मैले भन्नु पर्दछ, यद्यपि यो ब्लगको नाम परिवर्तन भए पछि लोकप्रियताको लोकप्रियता परिवर्तन भयो। जब म पहिले यातायातको एक ट्रिक प्राप्त गर्थें, अब म धेरै अधिक हिटहरू पाउँदैछु।
म सोच्न चाहन्छु कि सामग्रीको गुणस्तरले मलाई थप पाठकहरू आकर्षित गर्न मद्दत गरेको छ। तर डाटाबेस मार्केटरको रूपमा, मैले बुझें कि जब तपाईं अभियानको एक पक्ष बदल्नुहुन्छ र अन्य सबैलाई समान राख्नुहुन्छ - यो सामान्यतया परिवर्तन हो जुन तपाईं फरक फरक पार्नुहुन्छ। यस अवस्थामा यसले मेरो ब्लगको नाम बढि चाखलाग्दो नाममा राखेको थियो।
अवश्य पनि, यदि मसँग नाम छ भने रबर्ट स्कबल, सेन्ट गडिन, माल्कम ग्लेडवेल, आदि ... मँ मेरो ब्लग नाम को रूप मा स्टिक को लागी अधिक केहि गर्न आवश्यक छैन। यद्यपि Douglas Karr प्रसिद्ध छैन (अझै)। मैले एउटा घरको लागि रातो क्लिप व्यापार गरेन, नयाँ CIA सूचना प्रकाशित गरेन, वा मैले युवाको रहस्य पनि फेला पारेको छैन! म १ 15 मिनेट प्रसिद्धि खोजिरहेको छैन, तर केहि दिन म यी सबै विचारहरु एकै खण्डमा सँगै राख्छु।
मँ धेरै खुशी छु कि तपाईहरु मध्ये धेरै भेट्न आउँदै हुनुहुन्छ। ब्लग राख्नु भनेको मेरो दिमागको पछाडि हुन्छ। मैले यति धेरै व्यक्तिहरूबाट धेरै कुरा सिकें जुन मलाई लाग्छ ब्लगहरू, सम्भवतः वेबमा हुने उत्तम चीज हुन्।
टैग: ब्लग नामम्याल्कम ग्याडवेलनामरबर्ट स्कबलसेठ Godinशेल इजरायल
टेलिभिजन कमहरू र वेबले कसरी मद्दत गर्दछ भन्ने उदाहरण
समाचार छाप्नको लागि फिट हुन सक्ने अधिकांश समाचारहरू ... न्यूयोर्क टाइम्स सिक्ने
जुलाई,, २०१ at 16::2006। बिहान
के स्पाइक सेठ गोडिनको उल्लेखसँग मिल्दैन? (BTW मा बधाई छ)। मलाई थाहा छ उसले साईटमा लिंक गरेको छैन, तर म मान्दछु कि मुठ्ठीभर व्यक्ति तपाईंको नाममा खोजी गर्दछन्। के एनालिटिक्सले यो सबै देखाउँदछ? केवल जिज्ञासु ...
मैले त्यस दिन डग + केरको खोजीमा २ 27 हिटहरू प्राप्त गरें, तर त्यसदेखि केही पनि होइन। म प्रयोग गर्दै छु Google विश्लेषण। म साइन अप गर्न सुझाव दिन्छु, यो विशेष गरी उपयोगी छ यदि तपाईं आफ्नो ब्लग रिडरशिप ट्र्याक गर्न र बढाउन कोशिस गर्दै हुनुहुन्छ भने। साथै, यदि तपाईंसँग वर्डप्रेस छ भने, यो तपाईंको थिम फुटरमा लिपि प्रतिलिपि गर्ने मात्र कुरा हो। उठ्न र दौडिनको लागि धेरै सरल!
मँ मार्केटि changes परिवर्तनको केही आधारभूत अनुसन्धानमा सँधै इच्छुक छु। यो अब लगभग एक महिना पुरानो हो। तपाईको ब्लग पुन: ब्रान्डिंगको मध्यम अवधिमा के प्रभाव भएको छ?
म अपडेट गरिएको गुगल एनालिटिक्स चार्टमा रूचि राख्छु (लगभग छ हप्ता सम्म कभरेजको साथ दुई हुन सक्छ), प्रभाव मात्र केहि पछि समाप्त भयो कि भनेर हेर्नका लागि र साथै, अरूले समान लिंक-पाठको साथ तपाईंको नयाँ नाममा लि link्क गरे ( allinurl:…)।
म आशा गर्दछु तपाईं फलोअप प्रकाशित गर्नुहुनेछ।
म तपाईंलाई निश्चित रूपमा पोस्ट राख्नेछु र फलो-अप प्रकाशित गर्नेछु। मैले नियमित आधारमा साइटमा धेरै परिवर्तनहरू स्थापना गरें। यद्यपि यो विशेष ब्लग प्रवेशको लोकप्रियतामा मैले भरोसा लिएन। दयालु मान्छेहरुबाट नग्न कुराकानीहरू चासो पनि लिए मलाई डर छ कि यसले मेरो नम्बर एक बिन्दुमा पुर्‍याउनेछ जहाँ अन्य प्रभावहरूले फरक पार्ने नदेखिन सक्छन्। यो हुनु राम्रो समस्या हो, यद्यपि!
म अपडेट भएको गुगल एनालिटिक्स चार्टमा रुचि राख्छु (लगभग छ हप्ता सम्म कभरेजको साथ दुई हुन सक्छ), प्रभाव मात्र थोरै पछि देखा पर्‍यो कि छैन भनेर हेर्नका लागि, के अन्यले समान लिंक-पाठको साथ तपाईंको नयाँ नाममा लिंक गरे? allinurl :?)।
टिप्पणीका लागि धन्यबाद! मैले यो पोष्ट गरेदेखि बढि केहि बढि तथ्या .्कहरू प्रकाशित गरेको छु। मैले विकासलाई सम्हालेको छु - एक बिन्दुमा जुन अब ब्लगले वास्तवमै त्यतिबेला ट्राफिकलाई बौनायो। नम्बरहरू कहिल्यै तल झर्दैन जुन यो दृश्यमा थियो जुन तपाईंले देख्नु भएको छ त्यसैले म अझै पक्का विश्वास गर्दछु कि नाम परिवर्तन गर्दा ठूलो भूमिका खेलेको छ।
तपाईको विचारहरु को लागी धन्यवाद तर गुगल एनालिटिक्समा समय ढिला हुन्छ (hours घण्टाको लागि ....3घण्टा सम्म) कहिलेकाँही १ दिन हुन सक्छ ..
के म यसको लागि केहि गर्न सक्छु? यो समयक्षेत्र को बारे मा छ? वा यो गुगल एनालिटिक्सको साथ एक जेनरल समस्या हो?
जुलाई,, २०१ at 3::2007। बिहान
मलाई लाग्छ कि यो समस्याको कारण नयाँ ईन्टरफेस हो। अब तपाई गुगल एनालिटिक्सको नयाँ ईन्टरफेस प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यो राम्रो देखिन्छ। र त्यहाँ केवल hours- hours घण्टा ढिला हुन्छ।